Imbali yoPhuhliso - Shenzhen HONGSBELT
2018 Inkqubo yokuhambisa ukhuseleko lwesithuthi saseTshayina i-Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge ifakwe ngempumelelo kwisiza.Ukucwangciswa, ukuyila, ukuvavanya, ukuvelisa kunye nokufakwa kwisayithi yeprojekthi kuthathe iminyaka eyi-3, enegalelo ekuchumeni kwelizwe. ngeenzame ezipheleleyo ze-HONGSBELT!
NgoJuni 2017 U-HONGSBELT uphumelele iwonga lokuba nguMboneleli oGqwesileyo kunye neNtsebenziswano yobuChule ye-NUCTECH kwaye wamenywa ukuba athathe inxaxheba kwiforam yentsebenziswano yeminyaka engama-20 yeNUCTECH.
Meyi 2017 Isiseko semveliso sikaDongguan ngokupheleleyo (Ican Precision) yasekwa, ukutyala imali ngakumbi kwizixhobo zokuvelisa ezikrelekrele, ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukwandisa umthamo wemveliso, kunye nokukhawulezisa inkonzo yabathengi.
2016 I-HONGSBELT yawongwa ngesiqinisekiso soShishino loBugcisa obuPhezulu beSizwe. Ukusukela ngoko, umjikelo omtsha wokuqamba izinto ezintsha kunye nophuhliso lwaphakanyiswa ngaphakathi kwe-HONGSBELT. Kwangaloo nyaka, i-HONGSBELT yagqiba ukwakhiwa kwenkqubo yokuhambisa iimoto enzima yokuhlola ukhuseleko kwindawo yokuhlola uhola wendlela iXinjiang, iphawula ukunconywa okuphezulu kweemveliso ezinobunzima obuvela kwi-NUCTECH, kunye nokwenza igalelo elisebenzayo kuhambo olukhuselekileyo lwabantu.
2015 Ukusabela ngenkuthalo kwi "East forward strategy", i-HONGSBELT ikomkhulu leLi Lang Software Park eLonggang. Kwangalo nyaka, ngotyelelo lukasekela mongameli u-Sun Shangmin ovela kwi-NUCTECH, i-HONGSBELT yaseka indlela yayo yophuhliso engundoqo-imodeli yemveliso ye-MRC kunye nengqiqo yolawulo loyilo, iphucula ngokubanzi ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwizakhono zenkonzo yabathengi.
2014 I-HONGSBLET ifumana ngaphezulu kwe-60 imodeli yezatifikethi zelungelo elilodwa elisebenzayo kwaye ifumene iziqinisekiso zobugcisa zomntu wesithathu kwiimveliso zolungiselelo. Kwangalo nyaka, imveliso entsha yaphuhliswa ngempumelelo: inkqubo yokuhambisa i-universal roller kunye ne patent efanelekileyo. I-HONSGBELT ityikitye isivumelwano sentsebenziswano esicwangcisiweyo neNUCTECH.
2013 I-HONSGBELT ityikitye isivumelwano sentsebenziswano esicwangcisiweyo kunye neSafari Belting Systems, Inc(esuka eMelika) ukungena ngokupheleleyo kwimarike yaseMelika eneenkqubo zokuhambisa ezikrelekrele.
2012 I-HONGSBELT iphuhlise inkqubo yokuhambisa iirobhothi ezizenzekelayo ngokwayo. Kwangalo nyaka mnye, inkqubo entsha eshinyeneyo yokuhambisa ezenzekelayo yendawo yokugcina impahla enamacala amathathu yadalwa nguHONGSBELT, eyomeleze icandelo lothutho lwamashishini kwisixokelelwano sobonelelo. Kwangalo nyaka, i-HONSGBELT isayine isivumelwano sentsebenziswano esicwangcisiweyo kunye noMaxbelt Janusz Rak (ovela ePoland) ukuba angene ngokupheleleyo kwimarike yaseYurophu kunye neenkqubo zokuhambisa ezikrelekrele.
2011 Ngaphezulu kweearhente ezingama-50 kwihlabathi liphela, i-HONGSBELT iseka isicwangciso sophuhliso lwehlabathi ngolu hlobo lulandelayo: i-China, i-Indiya, i-Indonesia, i-South Korea, iThailand kunye ne-Vietnam njengeziko le-Asia (esekelwe e-China), i-Poland ne-England njengeziko leYurophu, iMelika njenge Iziko loMntla Melika, iChile, iArgentina, iBrazil njengeziko loMzantsi Melika, iJiphutha kunye neMorocco njengeziko loMntla Afrika, uMzantsi Afrika njengeziko loMzantsi Afrika, iNigeria njengeziko leNtshona Afrika, iOstreliya neNew Zealand njenge Iziko le-Oceania, ukuphumeza umsebenzi wethu: "Ukuhambisa, kuqhubela ihlabathi phambili."
2010 Isiseko semveliso yaseShenzhen Pinghu sasetyenziswa. I-HONGSBELT iphuhlise ngempumelelo inkqubo yokuhambisa imodyuli ekrelekrele yokuhlela ukungena kwinkalo yezobuntlola.
2008-2009 I-HONGSBELT iphumelele i-ISO9001-2008, iziqinisekiso ze-FDA zebhanti yokuhambisa imodyuli. Ukumisela izixhobo ezichanekileyo zesebe le-R&D, ukwazisa iitalente kuyilo lwezixhobo kunye nethekhnoloji, kuvula ihlabathi elitsha kuphando kunye nezixhobo zokuvelisa.
2007 Iimodyuli ze-HONGSBELT zesisombululo ezihlakaniphile ziqokelele kwi-600.
2006 I-HONGSBELT iseke isebe lokubumba kunye nenaliti, yazisa iintlobo zezixhobo eziphambili.
2005 I-HONGSBELT yasekwa e-Shenzhen, kunye ne-brand yayo --HONGSBELT. Senza amabhanti okuhambisa ahlakaniphile adityaniswe nokuchaneka kunye nezinto zobugcisa kwaye siyila iikhonsepthi ezintsha zemodyuli yenkqubo yokuhambisa ngobuchule. Kwangaloo nyaka, iSebe loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe (ITD) lasekwa, nto leyo ebonisa inyathelo le-HONGSBELT ehlabathini.
2000-2005 UMnu. Hong Jianrong, umseki we-HONGSBELT, ngokuqonda kwakhe okunzulu kunye neengcamango eziphambili zoshishino oluzenzekelayo, ngokusebenzisa uphando lwemarike iminyaka emihlanu kuwo onke amashishini, ucwangcise isicwangciso sobuchule se-HONGSBELT - Ukususela ekudityanisweni kwemveliso, ukubonelela kunye nokuthengisa kwixesha elide. iinjongo zophuhliso lweqhinga loshishino oluzenzekelayo.